Yedivayisi ukuqopha ulwazi okuthiwa isidingo nokwenza. Okokuqala, lokhu kukuthinta hard drive sekhompyutha, elikwaziyo ukubamba omningi okuqukethwe. E Windows XP kanzima inqubo drive nokwenza kusekelwe izinsika 3: ukufakwa dma Imodi, bhala ukulondoloza isikhashana kudiski futhi defrag.
Uma zokuqala ezimbili ongakhetha kakade amisiwe emisiwe sohlelo, bese elokugcina uhlale umbuzo kanjani ukwenza defragmentation. Njengoba-ke edinga gqwa evela kumsebenzisi.
Kuyini defragmentation. Incazelo yenqubo
Ngaphambi kokuba sicabangele ukuthi ukwenza defragmentation, chaza inqubo le nqubo. Khona-ke, cabanga ngezidingo esakhelwe futhi XP software iphakethe auslogics, nalo ehlukile isicelo-defragmenter.
Ngakho, nezinqubo ngenhla has izici ezilandelayo. Uma umsebenzisi ugijima uhlelo defragment drive yakho, ke eqala yi - ukusheshisa computer futhi ugijime usuku imisebenzi suku.
Kwi-hard drive yakho idatha kulotshwe izingxenyana ezincane by wemboni. Ifayela noma ifolda nge amafayela uvumelane ngokuphelele kungakapheli wemboni olulodwa. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ne kwalokho okuqhubekayo kokuqukethwe entsha phezu HDD, lezi izinto ezifanayo nazo ezilahlekelwe mayelana isikhundla sokuqala ngendlela yokuthi omunye ingxenye ifayela noma ifolda kungaba emkhakheni kokuqala lonke neminye imikhakha non-ohlanganisa. Kukhona izingcezu disparate yokuqukethwe ukufinyelela okuyinto kuthatha isikhathi eside kunokuvamile.
Ngakho, ukuze kusheshiswe idatha kusuka disk ukufunda, ngakho-ke, ukunciphisa isikhathi sokuvula isicelo noma idokhumenti, udinga ukuhlanganisa la izinsalela. kanjani disk defragmentation, manje sicabangela isibonelo amafasitela Umbuso njalo XP - Uhlelo defrag.exe
Leli thuluzi has a isikhombimsebenzisi sokuqhafaza, futhi lo muzwa ungenza uhlelo ngokwenza umsebenzi ongawenza nge-console zokuphatha - MMC. Kunezindlela ezimbili ukuqala console.
Esikhathini "ukuqala" yemenyu ukuvula "Run", bese iwindi ukusebenza ufake MMC, amaqembu, kodwa mina batusa ukwenza ngokuhlakanipha.
Okungukuthi, chofoza inkinobho kwesokudla igundane (iphedi) isithonjana "Computer" bese ukhetha ku olukumabhekezansi imenyu inketho "Computer Management".
Vula ukuphathwa amafasitela console, ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili. Lowo lincane futhi elise kwesokunxele, sizokwenza ekugcineni ubone ukuthi ukwenza defragmentation.
Khetha intwana "Disk Defragmenter" futhi chofoza kukho. Lokhu kuvula ifasitela lapho ungakwazi ukwenza le nqubo ku ethize hard disk partitioning.
Mhlawumbe kudingeka sithole ukuthi kukhona izingcezu okwengeziwe C. uhlelo ukwahlukanisa Khetha isithonjana sigaba ngokuchofoza igundane bese uchofoza "Disk Ukuhlaziywa". Lolu hlelo luzo luzosiza sihlaziye isimo ukwahlukanisa samanje, futhi ubonisa isifinyezo eningiliziwe ukuthi defragmentation luyadingeka ivolumu ekhethiwe.
Uma idiski kumele kusetshenzwe, cindezela inkinobho "defragmentation" ulindele imiphumela. Ngemuva kokuqeda inqubo, isicelo izoveza umbiko mayelana nomsebenzi owenziwayo. Uma noma iyiphi amafayela awakwazanga elungiselelwe, angeke isikhala esanele ku ukwahlukanisa. Khona-ke, ngaphambi kokuba defragmentation, iskhala eyengeziwe, bese uyazama futhi.
Sisebenzisa yokwandisa auslogics 5
Isethi ngenhla izinhlelo yakhelwe nokwandisa amafasitela. Futhi kule auslogics Series 5 kuhlanganisa defragmenter. Nakhu ukuthi defragment nalo (kucatshangwa ukuthi eziyinkimbinkimbi isivele ifakiwe):
Qala isicelo usebenzisa amalebula amafasitela ideskithophu.
Chofoza isithonjana njengoba blue ibhola ugqoko (amahora eduze).
Chofoza kwesokudla i-uchungechunge ukusebenzisa uhlu menyu engaphansi "Amathuluzi" - ". disk yesondlo / defragmentation"
Ku-window zohlelo ukuhlaziya noma defragment ngodonga. I Umbuso indawo ye auslogics seyithuthuke izici uma iqhathaniswa esakhelwe esivimba uhlelo. Zonke ezinye ukusebenza yayo ithi ayifane defrag.exe esibonakalayo